Nezvedu - Quanzhou Bangni Biotechnology Co., Ltd.
Quanzhou Bangnindiye anotungamira anogadzira anoshanda insoles, polyurethane insoles uye tsoka tsoka zvigadzirwa kune akawanda vatengi uye zvigadzirwa munyika dzakasiyana. Isu takazvipira kugadzira, kusimudzira uye kugadzirwa kwekugadzira uye ergonomic insole zvigadzirwa. zvigadzirwa zvedu zvigadzirwa ndezvi: orthotic insoles, PU insoles, kukurudzira insoles, Poron / gel tsoka tsoka zvigadzirwa uye kupisa inoumbika insoles. Muno, tinopa mukati-imba grafiki dhizaini, chigadzirwa dhizaini, kugadzira chakuvhuvhu, kugadzira sampuro, zvigadzirwa kugadzira, kurongedza mhinduro uye basa rekutakura. Isu tine zvakare simba rakasimba muOEM uye ODM. Fekitori yedu ndeye 7500 M2 yekugadzira nzvimbo ine vanopfuura vashandi ve100. Nedare redu rakagadzikana uye rakasiyana-siyana rekugovera, tinogona kukurumidza kushandura pfungwa yevatengi muzvigadzirwa. Zvakare nekushandisa tekinoroji yedu yekugadzira yakakura, isu tinogona kukurumidza kugadzira zvigadzirwa mukugadzira kwakanyanya.
Tine ruzivo, manpower & zvishandiso zvekukubatsira kuti uite basa riitwe. Ndapota taura nesu nhasi kuti uwane rumwe ruzivo kana kukumbira mutengo - tinotarisira kunzwa kubva kwauri nechikwata chako!
Kuti uve wekugadzira wepamusoro maindasitiri
Kugadzira uye Kubatanidza
Tarisa pane kugadzira kukosha kwevatengi
Shandira mutengi, kuzadzisa matanda kukosha, ita mipiro kunzanga
Rakarurama uye Rinobata Nguva
Bangni haisi chete fekitori yekugadzira; iyo zvakare ikambani yakazvipira pachayo kugadzira inzvimbo yekuremekedza, inosanganisira, yekutaurirana uye yekuvimbika.
Kubatanidzwa kwevashandi pamatanho ese ndiyo kiyi yekuvaka yedu yakasarudzika Bangni tsika
Saka tinovaka sei tsika yekambani yedu, tinoiita kuti ishande nenzira pazasi penzira nhatu:
1. Nhepfenyuro yezuva nezuva: tinokurudzira vashandi vedu kushandisa nguva yavo yemahara kunyora pasi ruzivo rwavo, zano ravo kana kunzwa kwavo nezvebasa, kambani kana hupenyu. Tine musangano wezuva nezuva pakutanga kwezuva panguva iyoyo, tichakoka mushandi wedu kuti awedzere zvinyorwa zvake. Pakupera kwegore, isu tichaunganidza ese akanaka essays kutsikisa rimwe regore bhuku- BANGNI VOICE
2. Magazini emwedzi nemwedzi: mwedzi wega wega, yedu yekushambadzira inoburitsa bhurocha rimwe kugadzirisa zvese kufambira mberi kwakaitwa nekambani yedu uye neese anoita
3. Zviitiko zvekuvaka zvikwata: kutamba mitambo, kutaurirana kana kungoita kudya kunozorodza.
MuBangni, isu tine basa kune vatengi vedu nevashandi vedu. Isu takazvipira kupa vatengi vedu nemhando yepamusoro yemasevhisi uye zvigadzirwa. Panguva imwecheteyo, isu zvakare tinotarisana nekupa yakachengeteka uye ine hushamwari nzvimbo yekushanda yevashandi vedu. Takazvipira kutarisira.
Bhizinesi Yemagariro Kuteedzera Initiative
BSCI Bhizinesi Yemagariro Kuteedzera Initiative